China Factory fonosana taratasy fonosana valopy sy mpanamboatra | Fangda
* Ny antontan-taratasy FANGDA valopy feno fonosana dia misy taratasy mangarahara, tsy misy akora mampidi-doza, vokatra maitso voajanahary 100%.
* Vokatra miantra amin'ny tontolo iainana izay be mpampiasa amin'ny indostrian'ny fandefasana sy ny lojika.
* Ataony azo antoka fa miaro tanteraka ireo antontan-taratasy fandefasana.
* Fanoherana mafy ny ranomaso, tsy mora vonoina, misoroka ny fahaverezana.
* Ny valopy saro-pady dia azo antoka ary miaro ireo antontan-taratasy izay miraikitra amin'ny ivelan'ny fandefasana
* Fampahalalana voatonta natao pirinty nangatahan'ny mpanjifa.
* Ny fanohanana mafana adhesive mafana dia manome adhesion mahery amin'ny sehatra samihafa toy ny taratasy, plastika, vokatra mihombo, sns.
* Ny valopy feno fonosana dia miaro ny kaonty voatanisa momba ny atin'ny entana nalefa mba hahafahan'ny manampahefana mampifanaraka ny lanjan'ny fonosana ary ny mpanjifa dia afaka manamarina raha mifanaraka amin'ny fanasokajiana ny atiny.
Soa azo avy amin'ny valopy valizy fonosana:
* Fiarovana sy filaminana azo antoka
Fonosana lisitra fonosana miaro ny antontan-taratasy arovana sy azo antoka ao anaty fitaterana.
* Manohitra ny toetrandro
Ny taratasy maharitra dia mitazona antontan-taratasy manan-danja miaraka ary arovana amin'ny loto, ny hamandoana ary ny singa.
Ampiharo amin'ny boaty, valopy, kitapo fandefasana mailaka, fantsona, sy ny maro hafa! Fatorana miraikitra maharitra eo noho eo amin'ny karazana substrat; esory fotsiny ny lamosina ary apetaho ny tsindry.
* R&D matanjaka miaraka amina patanty manokana.
* REACH sy ISO voamarina.
* Fampidirana mitsangana amin'ny famokarana: fantsom-panafody, famonoana silika, famokarana adiresy mafana sy fandrakofana, fanontana, famonoana ho faty… vita ao amin'ny atrikasa misy antsika manokana ny fizotrany rehetra.
* 20 taona mahery eo amin'ny sehatry ny coating.
Manaraka: Mpandefa mailaka